Akụkọ - Etu ị ga -esi ahọrọ nku anya ụgha nke ziri ezi maka ọdịdị anya gị? | Kalocils Mma
Anya nku ugha
Mpekere Mink 25mm
Mgbatị ntutu anya
Egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ
Egbugbere ọnụ Gloss
Palette nke anya
Ntu ntu Polish
Ihe ngosi ụlọ ọrụ
Kedu otu esi ahọrọ nku anya ụgha ụgha maka ọdịdị anya gị?
Ọtụtụ ndị mmadụ na -enwe mgbagwoju anya gbasara otu ha ga -esi mara ụdị anya anya ha na otu esi ahọrọ nku anya ụgha kwesịrị ekwesị. N'okpuru bụ mmeghe nkọwa na ntụnye maka amaokwu gị. Kalocils Mma na -enye gị lashes ụgha kacha mma mgbe niile.
Anya almọnd: A na -amata ọdịdị anya a site n'akụkụ dị mpụta. Ọtụtụ ụmụ nwanyị nwere ụdị anya a na -achọ ịbawanye omimi na ịdị ike nke anya ha, yabụ nwalee na eyeliner dị ka nkwuwa okwu siri ike na mkpuchi elu, agba na -anọpụ iche na -agba n'okpuru anya, yana akwa elu na nke ala na ndo dị iche iche. Iji nyere anya almọnd aka ka ọ na -ebu ibu, kpachie ihe dị n'akụkụ elu nke mkpuchi elu. Iji mee ka anya almọnd yie okirikiri karịa, kwụsị liner n'ihu akụkụ anya nke anya, ma ọ bụ jiri ndò dị nfe ma ọ bụ anwụrụ ọkụ ma ọ bụ nwee ihu ọma na mpaghara ahụ.
Kalocils 3D Series Lashes Lashes: ụdị ELLEN
Mechie Anya Anya: Anya mechiri emechi ga-abịaru nso na àkwà imi na ịbịaru ibe ha nso. Ị nwere ike nwee anya nwere mmechi nke bụ ụdị ọ bụla anyị tụlerela ma ọ bụ ha nwere ike bụrụ ngwakọta nke ụdị dị nso. A na-ahụkarị ndị nwere anya anya mechiri emechi dị ka ndị aghụghọ na ndị nwere ọgụgụ isi na anya mechiri emechi bụ njiri mara mma.
Kalocils 3D Series Ụgha Lashes: Ụdị DEMI
Anya miri emi: Anya ndị gbadoro ukwu na-adịkarị ibu ma tinye ya n'ime oghere karịa ọtụtụ. Ha nọ n'ụdị nke na -eme ka ọkpụkpụ ihu pụta pụta ìhè nke ukwuu na nsọtụ adịghị mma na -achọkarị ịta nri n'elu nku anya. Anya miri emi nwere anya nwere ike ịdị mkpa ka ị na -ahọrọ adịghị mma nke dị ogologo n'etiti, na -agbagọ agbagọ, pụọ na ihu. Lashes n'otu n'otu na -arụkwa ọrụ nke ọma maka ụdị anya a ka ị nwere ike itinye uche na etiti, na -etinyekwu ebe ahụ maka mbuli elu.
Kalocils 25mm Ọkwa ụgha: Style AVIVA
Anya dara ada: Anya na -ada ada na -adịkarị arọ karịa na nkuku elu na akụkụ dị elu na -ada ma ọ bụ gbadaa mgbe akụkụ dị n'ime na -atụgharị. Ọdịdị anya dara ada na -enwe oke mmụọ, ọ na -adị ka ọ dị arọ ma na -agba ume. A na -akpọkwa nke a anya anya ime ụlọ na ọ bụ ọdịdị anya dị ịtụnanya n'ezie. Anya na -ada ada na -ebukarị ibu ma na -etinye onwe ha nke ọma na ngwa etemeete dị arọ.
Kalocils 25mm Ọkwa ụgha: Style HELENA
Anya mkpuchi ihu: Ọ bụrụ na ị nwere anya kpuchiri ekpuchi, ị ga -ahụ ebe mgbatị dị ala karịa nkuchianya, yabụ mgbe anya mepere emepe, a naghị ahụ nkuchianya anya wee weghachi azụ n'ime oghere ahụ. Ọkụ dị mma maka udi a, dị ka anya miri emi, kwesịrị ịdị ogologo ma nwekwuo ogologo ihu na etiti. Mkpọkọta ụyọkọ ma ọ bụ ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike rụọ ọrụ nke ọma dịka ị nwere ike iwulite onwe gị iji mepụta ọdịdị achọrọ. Atụla egwu maka ịcha akwa dị warara, kpachara anya ka ị ghara ịhọrọ setịpụrụ nke nwere ike ịkwatu mkpuchi, mee ka ha yie obere.
Kalocils 25mm Ọkwa ụgha: Style ALLISON
Anya mkpuchi otu: A na-akọwa anya ndị nwere mkpuchi nwere ihu dị larịị na enweghị ntụpọ akọwapụtara, mgbe ụfọdụ enweghị otu. Anya Monolid na-enwekarị nku anya nke na-adịkarị ogologo na isi ike, yabụ mgbe ọ na-abịa ịbị ụtarị kacha mma, ọ kacha mma itinye uche na ihu dị ọtụtụ, nke na-efegharị ka ọ ga-eme ihe dị ịtụnanya na ịdọrọ uche dị aghụghọ ma nwee mmekọahụ na ụzọ a. nke ịma mma.
Kalocils 25mm Ọkwa ụgha: ZOEY Style
Anya ndị a ma ama/na -apụ apụ: Ụdị adịghị mma nwere ogologo, dị mkpụmkpụ na ogologo ogologo adịghị mma ga -enye ọkụ dị mma mana tinye uche na anya gị. Maka ụdị anya a ma ama ma ọ bụ convex, etemeete nwere ike inye aka belata ọdịdị ahụ ma ọ bụrụ na ọ na -akụ, ma ọ bụ na -apụta. Iji mee ka anya pụta dị ka a ga -asị na ọ na -agbada ntakịrị n'ihu, jiri ndò gbara ọchịchịrị nke onyinyo anya n'akụkụ ahịrị adịghị mma na ntọala mkpuchi. Jiri ndò dịtụ ntakịrị karịa maka ntụpọ ahụ, ma gwakọta ya gaa n'ihu ọkpụkpụ ọkpụkpụ ahụ.
Kalocils 3D Mink Lashes: Ụdị DONNA
Anya Gburugburu: Ọdịdị anya a na-ebukarị ibu, na-emeghe anya ma ọtụtụ ụmụ nwanyị na-enwe mmasị iji etemeete mee ka anya dị ogologo. Jiri ihe nrịbama gbara ọchịchịrị gbatịa karịa nkuchi anya na nkuku elu iji nye echiche efu a. Jiri ndò anya nke anya na nkuchi anya (ruo na crease) wee gbatịa ndò ntakịrị ka ha abụọ gbagoo na ọkpụkpụ ihu na ntakịrị gbadaa na mkpuchi ala iji mepụta anya anya gbatịkwuru agbatị.
Kalocils nku anya ndọta: kit ndọta ndọta
Oge nzipu: Dec-23-2020
Nke a bụ akara ngosi Kalocils Beauty sitere na Nanchang Weiti Technology Co., Ltd ọkachamara n'ichepụta nku anya ụgha, eyeliner, gloss egbugbere ọnụ, nku anya, mascara wdg Enwere ike ịhọrọ ngwaahịa ịchọ mma dị iche iche n'aka anyị. E guzobere akara ngosi Kalocils Beauty 2019, mana anyị nwere ihe dị ka afọ 10 nrụpụta etemeete mara mma na ahụmịhe na mbupụ. Maka ugbu a, anyị nwere ihe omumu ihe ruru mita 3000 na ndị ọrụ kwụsiri ike 100. Ọnụ ahịa mbupụ anyị kwa afọ karịrị US $ 3000,000. Enwere m olile anya na anyị nwere ike guzobe mmekọrịta azụmaahịa ogologo oge ma mee ka uru ibe anyị mezuo.
Copyright - 2010-2021: Ikike niile echekwabara. Ngwaahịa na -ekpo ọkụ - Map saịtị
eyeliner, mink lashes, egbugbere ọnụ, Anya anya, Mgbatị ntutu anya, Ndị na -ere ntutu anya,